Weli Ma U Baahan Tahay Mammogram Ka Dib Qalliinka Kansarka Naasaha?
Qalliinka ka dib kansarka naasaha, haween badan ayaa isweydiinaya inay weli u baahan doonaan inay qabsadaan ballantooda naaska sannadlaha ah. Jawaabtu waxay kuxirantahay dhowr arrimood oo shaqsi bukaan socod ah, oo ay kujiraan nooca qalliinka kansarka naasaha lagu sameeyay. Kooxda daryeelka ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ee Bartamaha Ohio waxaa ka go'an inay ka caawiyaan haweenka safarka inta badan culeyska badan ee nolosha ka dib kansarka naasaha. Xarunteena casriga ah ee Columbus, OH, waxaan ku faraxsanahay inaan ku siino shaqsi shaqsiyadeed oo raaxo leh mammografi waayo-aragnimo u leh dhammaan bukaanada. Akhriso si aad u hesho jawaabaha dhammaan su'aalahaaga ee ku saabsan goorta, sababta, iyo inta jeer ee mammogram ka dib kansarka naasaha laga yaabo inay adiga kuugu baahdaan.
Maxay muhiim u tahay raajada naasaha?
Sababtoo ah burooyin iyo koritaano badan lama dareemi karo inta lagu jiro baaritaanka jirka sababo la xiriira cabirkooda ama meesha ay ku yaalliin, daraasadaha sawir qaadista mammogram-ka ayaa loo adeegsadaa baaritaanka hore ee kansarka naasaha. Marka kansarka naasaha goor hore la ogaado, caadi ahaan waa laga daaweyn badan yahay marka laga helo marxaladda dambe.
Goorma ayaan u baahanahay raajada naasaha?
Haddii aad qabtid kansarka naasaha ama aadan qabin, waxaa suuragal ah in lagugu dhiirigaliyo inaad hesho raajada naasaha oo sanadle ah laga bilaabo da'da 40 jir. lagama maarmaan u tahay in la maro hore iyo / ama in ka badan oo raajada naasaha ah. Qaar ka mid ah arrimahan halista ah waxaa ka mid ah:
Degdeg ah taariikhda qoyska ee kansarka naasaha
Caadada oo daaho
Halista hidde ee kansarka naasaha
Taariikhda shaqsiyadeed ee kansarka naasaha
Intaa waxaa sii dheer, haweenka ogaada buro taabasho oo ku dhacda naaska ama kilkilaha, isbeddelada naasaha ama ibta naaska, ama dheecaanka naaska ayaa laga yaabaa inay u baahdaan raajo naaso degdeg ah.
Ma u baahanahay raajada naasaha kadib qalitaanka naasaha?
Qalliinka ka dib kansarka naasaha, haween badan ayaa si la fahmi karo ula yaaban haddii, goorma, iyo sababta ay weli ugu baahan doonaan raajada naasaha. Bukaannada leh mastektomi laba-geesood ah, oo macnaheedu yahay in labada naasba gebi ahaanba laga saaro, mammography-ka caadiga ah waa inaan loo baahnayn. Si kastaba ha noqotee, bukaanada laga saaray hal naas oo keliya ayaa wali u baahan doona raajada mammogram joogto ah si loola socdo naaska haray. Xaaladaha qaarkood, bukaanadani waxay u baahan karaan sawir-raadin ka badan hal jeer sanadkii. Ugu dambeyntiina, bukaanada leh lumpektomi ama qeyb ahaan mastektomi, taasoo ka tagta qadar kasta oo nudaha naaska ah, wali waxay u baahan doontaa mammogram joogto ah si loo hubiyo in buro dheeraad ah ama koritaan aysan ku soo bixin unugyada naaska haray.
Kansarka naasaha maka soo laaban karaa qalliinka naasaha kadib?
In kasta oo aadan u baahnayn mammogram-ka caadiga ah ka dib qalliinka naasaha, haddana weli waa muhiim inaad ka soo qayb gasho dhammaan ballamahaaga dabagalka ah. Mastektomi ka dib, kansarka naasaha wuxuu ku laaban karaa darbiga laabta iyo unugyada kale. Si kastaba ha noqotee, koritaanadan waa la ogaan karaa inta lagu jiro baaritaanka jirka. Haddii dhakhtarkaagu fahmo buro shaki leh inta lagu jiro baaritaanka naasaha, daraasad takhasus gaar ah ayaa laga yaabaa in la dalbado.
Ku ilaali caafimaadkaaga muddada dheer mammograamyada sanadlaha ah ee Columbus, OH
Haddii aad la kulantid mastektomi ama aad horey u qaadatay qalliinka kansarka naasaha, waa lama huraan inaad fahamto muhiimadda ballamaha joogtada ah ee dabagalka ah iyo haddii aad weli u baahan tahay raajada naasaha sannad kasta. Haddii aad hayso su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan helitaanka raajada naasaha ka dib qalliinka kansarka naasaha ama aad rabto inaad jadwal u sameyso jadwalkaaga mammogramka caadiga ah, wac Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ee Columbus, OH inaad la hadasho mid ka mid ah xubnahayada aqoonta leh maanta!